နိုင်ငံတကာ တရားခုံရုံးတွင် ဂမ်ဘီယာ စွဲဆိုလျှောက်လဲရက်ကို ၃-လနှင့် မြန်မာ၏ ချေပ လျှောက်လဲရက်ကို ၆-လ ရက်တိုးမြှင့်၍ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း ICJ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန် – H2Oupdatenews
နိုင်ငံတကာ တရားခုံရုံးတွင် ဂမ်ဘီယာ စွဲဆိုလျှောက်လဲရက်ကို ၃-လနှင့် မြန်မာ၏ ချေပ လျှောက်လဲရက်ကို ၆-လ ရက်တိုးမြှင့်၍ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း ICJ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်
oungmarine11@outlook.com 27/05/2020	No Comments
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ အမြင့်ဆုံးတရားစီရင်ရေး နိုင်ငံတကာတရားခုံရုံး ( ICJ ) ၌ လူမျိုးသုဉ်းစေခြင်း နှင့်ပတ် သက်၍ နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းပါအချက်အလက်များအား လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကနဦး တရားစွဲဆိုထားသော ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ လျှောက်လဲချက်ပေးရမည့်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်သို့ ရက်တိုးမြှင့် အချိန်ပေးလိုက်ကြောင်း May 26 2020 ရက်စွဲဖြင့် ICJ က သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
မြန်မာအပေါ် စွဲချက်တင်ထားသည့် ဂမ်ဘီယာက ၎င်း၏ တရားခွင်ရှေ့မှောက် လျှောက်လဲရမည့်ရက်ကို ကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါကပ်ကျရောက်လျှက်ရှိခြင်းကြောင့် အနည်းဆုံး ၃-လ ရက်တိုးမြှင့် အချိန်ပေးရန်၊ မြန်မာကိုလည်း အလားတူ အချိန်တိုးမြှင့် ခံစားခွင့်ပေးရန် ဧပြီ ၂၄ ရက်တွင် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်က စာရေးသား လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း ICJ ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါဝင်သည်။
ဂမ်ဘီယာ၏တောင်းဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကပ်မှာ တရားစီရင်ရေး အနှစ်သာရအပေါ် သက်ရောက်သည် မယူဆကြောင်း၊ ဂမ်ဘီယာ၏ တောင်းဆိုချက်ကို မြန်မာဘက်က တစ်စုံတစ်ရာ ထင်မြင်ချက်ပေးရန်မရှိကြောင်း၊ ဂမ်ဘီယာ၏ လျှောက်ထားချက်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်မှု့ ရှိ-မရှိ တရားရုံးတော်အနေဖြင့်သာ ဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်း ဧပြီ ၂၈ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်က အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့သည်။
ထိုအတွက် ဂမ်ဘီယာ၏ စွဲဆိုလျှောက်ထားရမည့်ရက်ကို ဇူလိုင် ၂၃ ရက်အစား အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်သို့ ၃-လ ရက်တိုးမြှင့် အချိန်ပေးလိုက်ကြောင်း၊ ခုခံလျှောက်ထားမည့် မြန်မာကိုလည်း ဇန်နဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၂၁ အစား ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၂၁ သို့ ၆-လ အချိန်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ICJ က ဖော်ပြသည်။
((( ICJ. Press Release. No. 2020/14 ., 26 May 2020 “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar) Extension of the time-limits for the filing of the initial pleadings” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: တရုတ်ကြီး၏ ဝူဟန်နေ လူ ၁၀-သန်းကို Covid-19 ရောဂါပိုး ရှိ- မရှိ ၉-ရက်တည်းနှင့် စစ်ဆေးနည်း။ လူအမြောက်အများကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနည်းပညာဘောင်ဝင် အချိန်တို အကုန်အကျ နည်းပါးစွာ စမ်းသပ်
Next Next post: အမေရိကန်၌ လူသေအလောင်းများမှ ဟမ်ဘာဂါပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောဆိုချက်များကို လူမှုကွန်ရက်မှ တရုတ်ဖျက်ချနေဟု ဆို။